ဘာသာရေး ဆွေးနွေးတဲ့ ထိုင်ဝိုင်း – Kyaw Kyaw Oo's Thoughts, Love and Hope
Posted on March 31, 2009 April 28, 2009 by kyawkyawoo	Posted in Uncategorized
ကျွန်တော်တို့မိတ်ဆွေတစ်စု လတိုင်းရဲ့ တနင်္ဂနွေတရက်မှာ ဘာသာရေး
ဆွေးနွေးတဲ့ ထိုင်ဝိုင်း ကလေးလုပ်ဖြစ်တာအတော်လေးအရှိန်ရလာပါပြီ။
ဒီအစီအစဉ်ကိုစသူက မိတ်ဆွေရင်း Professor တဦးဖြစ်ပါတယ်။
ဆွေးနွေးပွဲမှာပုံမှန်လာသူတွေက မလေးရှား၊အင်ဒိုနီးရှား တရုပ်၊ဖီဂျီ၊နိုင်ဂျီးရီးရား၊
ယူဂန်ဒါ၊ရုရှား၊မှ Islam ဘာသာရေးပညာရှင်များဖြစ်ပါတယ်။
အနည်းဆုံးတော့ Master Degreeရယူထားပြီးသူများဖြစ်ပြီး တော်တော်များများကPhDကို
ဥပမာ ဖီဂျီကပညာရှင်ဟာသူ့တိုင်းပြည်မှာမုဖသီ ပါ။သူ့ရဲ့အဓိက
လေ့လာမှူကHadith ပညာဖြစ်ပြီးHadith များနဲ့ပတ်သက်လို့အံ့ဩလောက်အောင်
နောက်တယောက်ကနိုင်ဂျီးရီးယားက Hafitz လူငယ်ပညာရှင်ပါ။သူက
Sufism ကိုသုတေသနပြုနေသူပါ။ အလွန်သာယာနာပျော်ဖွယ်ကောင်းတဲ့
အသံရှိလို့ဆုဒိုအာများအမြဲတောင်းပေးရန်သူ့ကိုအားလုံးက Request လုပ်ကြ
ဒေါက်တာဂဖူးကတော့ရူရှားလူမျိုး Islam ပါ။သူပြောပြတဲ့ ရူရှားပြည်ကဘိုးဘွားများ
အကြောင်း post တခုရေးဖို့ရည်ရွယ်ချက်ရှိပါတယ်။
ကုရအန်ရဲ့အာယတ်တော်များကို Arabic ဘာသာမူရင်းအတိုင်းမှ
Allah (SWT)ရဲ့ Islam သာသနာကို ဆွေးနွေးကြတဲ့ ကျွန်တော်တို့ရဲ့
3 thoughts on “ဘာသာရေး ဆွေးနွေးတဲ့ ထိုင်ဝိုင်း”
Good to know this info. Thank you brother.
အာရပ် နှင့်အာယတ်သတ်ပုံအမှားပြင်ပေးသော Mg Salafi ကိုအထူးကျေးဇူးတင်ပါကြောင်း။